N95 Respirator, Saron-tava tsy azo ampiasaina, Saron-tava Kn95 tarehy - Shuer
Ny orinasanay vondrona
Sichuan Shuer Medical Equipment Co., Ltd. dia orinasa teknolojia avo lenta mifantoka amin'ny fikarohana, fampandrosoana, famokarana ary fivarotana vokatra sarontava. Ny foibeny sy ny toby R&D dia miorina amin'ny toerana kanto any Chengdu, izay fantatra amin'ny maha-tanàna nahaterahan'ny panda goavambe. Ny orinasa dia mandrakotra velarantany 9.872 metatra toradroa. , Mametraha tsipika famokarana ho an'ny lamba semi-vita vita amin'ny lamba / lamba tsy sarona / saron-tava. Manana ny teknolojia mahery vaika sy ny fahaiza-manao R&D ny orinasa, ary neken'ny governemanta ho toy ny "orinasam-teknolojia avo lenta sy antoky ny famatsiana antoka an'i Shina."
Ny orinasa dia nifikitra hatrany tamin'ny fitsipiky ny fitantanana ny orinasa mifantoka amin'ny talenta sy manao ny marina. Izy io dia manana ekipa fitantanana famokarana sy fikarohana ara-teknika ary fampandrosoana izay misy tompo 15, lohateny teknika avo lenta an'ny bakalorea, ary efitrano fitiliana manokana (fitaovana fanandramana 17) ary laboratoara fikarohana sy fampandrosoana ho an'ny teknolojia. , Mba hahafahan'ny orinasa mijanona ho mpifaninana amin'ny fifaninanana tsena masiaka ary mampiorina ny kalitaon'ny vokatra. Izy io dia manana tsipika famokarana lamba 6 tsy voatenona, tsipika famokarana lamba tsy misy tenona 2, tsipika fitambarana ultrasonika 1, ary tsipika fitambarana teboka 1, tsipika famokarana 1 ho an'ireo pads fandidiana, tsipika famokarana 10 ho an'ny saron-tava fisaka, tsipika famokarana 3 ho an'ny sarontava telo-habe, ary andalana famokarana 2 ho an'ny sarontava endrika kaopy. Ny vokatra sy ny kalitao dia hatsaraina miaraka!
Masinina sy fitaovana
5500t + 1 miliara
Ny rojo famokarana vokatra
MESINY TSY MISY
TSY MANAO FABRIKA
3-Layer tarehy manohitra fanefitry ny bakteria fanoherana ...
Saron-tava azo ovaina miady amin'ny bakteria 3-Layer (Ny ...
Saron-tava azo ovaina miady amin'ny bakteria 3-Layer (Sta ...
Teny filamatra an'ny orinasa
Ireo mpikatroka mafàna fo avy any Greenpeace dia tany amin'ny fitsarana tany UK tamin'ity volana ity taorian'ny nandoko ny teny filamatra teny amin'ny fantsona famokarana herin'aratra tao Kingsnorth any Kent, ampahany amin'ny fanoherana ny drafitra fitrandrahana arintany any an-toerana.
Ny mpankafy BTS Indiana dia manangona vola haingana amin'ny com ...
krizy virus Coronaavirus Tao anatin'ny krizy virus coronavirus any India dia nandray andraikitra ny mpankafy BTS nanangona vola hanampiana ireo sahirana. Ny herinandro lasa teo, ny ezaka fanampiana Covid-19 izay natambaran'ny vondrona iray avy amin'ny B ...
Araho ireto dingana ireto hitafy, esory ary anaovy ny sarontava tarehy 3M isan'andro. Ny saron-tava isan'andro dia mety amin'ny akanjo isan'andro amin'ny toerana ampahibemaso, azo nosasana tanana ary azo ampiasaina indray amin'ny lanjany maharitra. Ny ...
Miaro ny olona mitafy azy ve ny sarontava ...
"Heveriko fa ampy ny porofo milaza fa ny tombontsoa tsara indrindra dia ny olona manana COVID-19 hiaro azy ireo amin'ny fanomezana COVID-19 ho an'ny olon-kafa, saingy mbola hahazo tombony amin'ny akanjo ...
Tamin'ny 6 hariva tamin'ny 4 Novambra 2018 dia vita soa aman-tsara ny Autumn Canton Fair, izay natrehan'i Sichuan Ju Neng! Naharitra 5 andro ny fampirantiana ary nahazo 127 ny mpanjifa any ivelany ...
Beijing dia mandray anjara amin'ny China Medical Acc ...
(Famaritana famintinana) Lu Lin, CEO an'ny orinasa, dia nasaina handray anjara amin'ny fihaonana an-tampon'ny fampiasa isan-taona ny kojakoja ara-pitsaboana sinoa any Beijing ny 6 Mey 2019. Niresaka tamin'ny indostria izy ...
Sichuan Jueneng Filter Materials Prepar ...
(Famaritana famintinana) Ny orinasa dia manome lanja lehibe ny Canton Fair amin'ny fararano ary nanao fanomanana mavitrika momba izany. Ireto manaraka ireto dia namboarina: ny orinasa taloha ...
Ny haavon'ny kalitao sy ny serivisy tsy manam-paharoa Manome serivisy namboarina ho an'ny vondrona sy ny olona izahay Manatsara ny serivisinay amin'ny alàlan'ny vidiny ambany indrindra.
Vokatra mafana - Sitemap - AMP Mobile Saron-tava 3 azo ampiasaina miaraka amin'ny Fda, Saron-tava fandidiana ambaratonga 3, Saron-tava tsy miendrika 3 Ply, Saron-tava azo ampiasaina 3ply, Saron-tava Ffp3, Saron-tava fandidiana 3ply,